नाफा बुक गर्ने र खरीद गर्ने दुवै लगानीकर्ता सक्रिय, १२६०.६८ विन्दुमा नेप्से | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण नाफा बुक गर्ने र खरीद गर्ने दुवै लगानीकर्ता सक्रिय, १२६०.६८ विन्दुमा नेप्से
वैशाख १०, काठमाडौं (अस) । मंगलवार नेप्से ३ दशमलव ७४ अंकले बढेर १ हजार २६० दशमलव ६८ विन्दुमा बन्द भएको छ । कारोबार भएका ११ समूहको परिसूचकमा पाँच समूहको परिसूचक बढेपछि सम्रग नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ३० प्रतिशतले बढेको हो । बैंकिङ, विकास, वित्त, निर्जीवन बीमा र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक बढेको छ । १ हजार २५६ दशमलव ६३ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक आधा घण्टामा यस दिनको उच्च विन्दु १ हजार २६८ दशमलव १३ विन्दुसम्म पुगेको थियो ।
बढेको बजारमा केही लगानीकर्ताहरूले नाफा बुक गर्न लागेपछि बजार १ हजार २४८ दशमलव ५७ विन्दुसम्म आइपुगेको थियो । यस दिन नाफा बुक गर्ने र खरीद गर्ने दुवै पक्ष सक्रिय रहँदा बजार धेरै माथि र धेरै तल जान नसकेको हो । बजारमाथि जानको लागि हाल प्रकाशित भइरहेको तेस्रो वित्तीय विवरणको प्रभाव देखिन्छ ।
यस दिन रू. ६१ करोड ४१ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम ४१ दशमलव २९ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो दिन रू. १ अर्ब ४ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव ९० अंकले बढेर २ सय ७२ दशमलव २७ विन्दुमा पुगेको छ ।
कारोबार भएका १७६ कम्पनीमा ६५ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ८८ कम्पनीको शेयर मूल्य घट्न पुगेको छ । साथै, २३ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको मूल्य समायोजन मूल्य बढेर सर्किट ब्रेक
नेप्सेमा हकप्रद प्रयोजनको लागि एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको मूल्य समायोजन नभएपछि शेयर मूल्य बढेर सर्किट लागेको छ । नेप्से सोमवार कम्पनीको मूल्य समायोजन गरेको थियो । मंगलवार कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ३५ ले बढेर प्रतिकित्ता रू. ३८९ मा कारोबार भएको छ । दोस्रोमा श्री इन्भेष्टमेण्ट फाइनान्स कम्पनीको शेयर मूल्य ७ दशमलव १४ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता रू. १५० मा कारोबार भएको छ । घलम्दी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य ४ दशमलव ७९ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता रू. १३९ मा कारोबार भएको छ ।
छिमेक लघुवित्तको सर्वाधिक कारोबार
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छिमेक लघुवित्त कम्पनीले १८ प्रतिशत बोनस शेयर र २२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने स्वीकृति पाएपछि कम्पनीको शेयर कारोबार बढेको हो । कम्पनीले वैशाख ३० गते साधारण सभा समेत बोलाएको छ । कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. १ हजार २१ मा रू. ४ करोड ९६ लाख बराबरको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । दोस्रोमा नेपाल बैंकको प्रतिकित्ता रू. ३०९ मा रू. ४ करोड २१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १६:१८
८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:१३
८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १२:०९